(24 ) Street Photography ဓါတ်ပုံပညာရပ် ဆိုင်ရာမှတ်စု (၂၄)
လမ်းသွား လမ်းလာ ရိုက် ဘွယ်ရာ
ဤ Street Photography မှတ်စု မှာ ကျွန်တော် Street Photography နှင့်ပတ်သက်၍ သိ လို သဖြင့် နေရာစုံ မှစုဆောင်း ထားသည့် ဆောင်းပါး များကို စုပေါင်းကာ ဆီလျှော် သကဲ့ သို့ မြန်မာဘာသာ သို့ ပြန် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နမူနာ ပုံများ မှာ လည်း အဆိုပါဆောင်းပါး များတွင် ပါသည့် ပုံ များ အနက် ယခု ရေးသားသည့် အကြောင်း အရာနှင့် ဆီလျှော် သည့် ပုံ များကို ထုတ်နှုတ် ကာ နမူနာ ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြ အပ်ပါ သည်။
Street Photography ဆိုသည်မှာ။
Street Photography ဆိုသည်မှာ လမ်း ၊ ဥယာဉ် ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ၊ ကုန်တိုက် ကြီးများ အတွင်း စသည် ကဲ့သို့ အများပြည်သူ သွားလာ လှုပ်ရှားနေသည့် နေရာမျိုး နှင့် အမျိုးမျိုး သော အကြောင်းအရာ တို့ဖြင့် စုဝေးကြသည့် လူစုလူဝေးများအား Subject သတိမူမိခြင်း မရှိဘဲ ရိုက် ကူး သည့် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူး နည်း ကို ခေါ်သည်။
Street Photography နမူနာပုံ များ။
Street Photography ရိုက်ရာတွင် သတိပြုရ မည့် အချက်။
လမ်းသွား လမ်းလာလူအများကို အားလုံး ခြုံ၍ရိုက်ခြင်း ၊ တစ်နည်း အားဖြင့် ပြောရပါလျှင် မိမိ ရှေ့ ရောက်လာသည့် Subject ကို ပေးလာသည့် အခြေအနေအရ ရိုက်လိုက်ခြင်း နှင့် တကူးတက တမင်ရှာဖွေကာ ချောင်း၍ ရိုက်သည့် Sneak-Shot နှစ်ခု ရောထွေး သွားနိုင် ပါသည်။ Street Photography တွင် အန္တရာယ် များသည့် Sneak-Shot ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင် သင့်ပါသည်။ ရိုက်သင့်သည် ထင်သည့် အရာကို ဗျောင် ရိုက်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ကသိကအောင့် ဖြစ်စေလောက် သည့် ၄င်း ၏ မျက်နှာ ရှေ့တည့်တည့် တွင် ကင်မရာ ချိန်ရိုက် သည့် ပုံမျိုးလည်း ရှောင်ရှားရန်လိုသည်။ ကင်မရာကို ဖွက် ကာ ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ရိုက်ခြင်း မျိုး ကို လည်းရှောင်ရှားရန် လိုပါသည်။
Street Photography နှင့် ဥပဒေ ကြောင်း ဆိုင်ရာ။
အခြား အရေး ကြီး သည့် အချက်တစ်ချက်မှာ ဥပဒေရေးရာ ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံ သမားတစ်ဦးသည် တစ်စုံ တစ်ဦး၏ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လမ်းမပေါ်တွင် သွားလာနေ သူများ ကို တရားဝင် ဓါတ်ပုံရိုက် ခွင့် ရှိသလားဆို သည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် တွင်မူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်း၏ လွတ်လပ်ခွင့် ( Privacy )ကို မထိပါးစေဘဲ လမ်းမ၊ လမ်းမျှောင်၊ ဥယာဉ် များတွင် ရိုက်ခွင့်ရှိသည်ဟု စာရေးဆရာ နှင့် အယ်ဒီတာ ဖြစ်သူ Jim Heid က ၄င်း၏ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ရေး သား ထားသည် ကိုတွေ့ ခဲ့ဘူးပါသည်။
ဤ အချက် မှာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ နှင့် တစ်နိုင်ငံ ကွာ ခြားနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံ တွင်မဆို ကာကွယ် ရေးဆိုင်ရာ အဆောက် အဦ ၊ မဟာဗျူဟာ ကျသည့် နေရာ စသည် များကို ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရဟု သတ်မှတ်ချက်ရှိပါမည်။ လမ်းမပေါ်၌ ဓါတ်ပုံမရိုက်ရ ဟူသော တိကျသည့် ကန့်သတ်ချက်မှာတော့ ရှား ပေလိမ့်မည်။ လမ်းပေါ် ရိုက်လျှင် လမ်းလျှောက် သည့် လူ ပါမည်ပင်။ သို့ သော် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးခြင်း၏ လွတ်လပ်ခွင့် ( Privacy )ကို ထိပါး စေနိုင်လောက်သည့် ပြုမူ ဆောင်ရွက်ချက်ကိုမူ မည်သည့်နိုင်ငံတွင် မှခွင့် ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ ယင်းအချက်ကို အထူးသတိပြုထား သင့်ပါသည်။
ဤ နေရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးခြင်း ၏ လွတ်လပ်ခွင့် ( Privacy ) ဆိုသည့် အဓိပ္မါယ် ကို ရှင်းလင်းရန် လိုလာပြန်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးခြင်း ၏ လွတ်လပ်ခွင့် ( Privacy ) ဆိုသည်မှာ အနှောက် အယှက်မရှိ ဘဲ တစ်ဦးထည်း ရှိပိုင်ခွင့် " The right to be let alone." ဟူ၍ အမေရိကန် တရားသူကြီးချုပ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Justic Thomas McIntyre Cooley က ဥပဒေ ကြောင်းအရ အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ဆို ပါသည်။ အမေရိကန် ဥပဒေ ရော အင်္ဂလိပ် ဥပဒေ ကပါ အဆိုပါအတိုင်း အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ဆို ထားပါသည်။ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လက်ခံ ထားသည့် အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ဆို ချက်ဖြစ်ပါသည်။
လမ်းပေါ်တွင် လှုပ်ရှား သွားလာနေသူများသည် အများပြည်သူအားလုံးနှင့် ဆိုင်သည့် Public Place တွင် ဖြစ်သောသောကြောင့် " Right to be let alone " တွင် အကျုံးဝင် မည် မဟုတ်ပါ။ သို့ ရာတွင် သီးသန့်နေရာဟု ဆိုနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ရေကူးကန်တွင် ရေကူးနေသည့် အနေ အထားမှာမူ " Right to be let alone " တွင် အကျုံးဝင် နိုင်ပါသည်။ ဤ သည် မှာလည်း တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ဥပဒေ ခြင်း မတူနိုင်ပါ ။
မကြာမြင့်မှီကမှ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗြိတိန် အိမ်ရှေ့ လောင်းလျှာ မင်းသား William ၏ ဇနီး Kate Middleton အပေါ်ပိုင်း ဗလာ ကျင်းနေသည့် ဓါတ်ပုံကို ပြင်သစ် ဂျာနယ် တစ်ခု ကဖေါ်ပြမည်ဟု ဖြန့်ချီခြင်းမပြုမီကပင် အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည်။ Willam နှင့် Kate တို့က ဗြိတိန် ဥပဒေ အရ Pravicy ကို ထိပါးသည်ဟု ဆိုကာ တရားစွဲ မည်ဟုဆိုသည်။ ပြင်သစ်ပြည်သူများက အဆိုပါပုံကို ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုတွင် ရိုက်သည်ဟု ထင်ကာ Pravicy ကို ထိပါးမှုမရှိဟု ဆိုကြသော အသံများ ပထမပိုင်းတွင် ထွက်လာခဲ့သည်။ မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကလည်း အဆိုပါပုံ သည် Pravicy ကို ထိပါးခြင်း မရှိသော ပုံ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ထိုအမှုကို အမှုဖြစ်ပွားရာ ပြင်သစ်၌် တရားစွဲဆိုခဲ့ သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်မူ အဆိုပါ ပုံမှာ Kate သည် ပြင်သစ်ရှိ ဆွေမျိုးအိမ် တစ်အိမ်၏ ၀ရန်တာသို့ ထွက်နေစဉ် Long Tele နှင့် ဆွဲကာ ရိုက်သည့်ပုံ ဖြစ်နေသဖြင့် William နှင့် Kate တို့ က အမှု နိုင်သွားသည်။ အကြမ်းဖျဉ်း ကောက်ချက်ချရပါက ကမ်းခြေတွင် ရိုက်ပါက Public Place ဖြစ်သောကြောင့် Privacy ဖြစ်သည့် " Right to be let alone " နှင့် အကျုံးမ၀င်ဟု ဆိုသည့် ကောက်ချက်ဆွဲ နိုင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိသော်လည်း အချင်းဖြစ်သည့်ပုံ မှာ အိမ်ဝရန်တာတွင် ရိုက်သော ပုံ ဖြစ်နေသည့် အတွက် " Right to be let alone " ဆိုသည့် Privacy နှင့် အကျုံးဝင်နေသော ကြောင့် မဂ္ဂဇင်း တိုက် အမှု ရှုံး သွား ရခြင်းဖြစ်သည်။
Street Photography ရိုက်ရာတွင် မှတ်သားထား သင့်သည့် အချက်များ။
၁။ ရိုက်ရန် ရှိသည် ကိုရိုက်သာ ရိုက်ပါ
လမ်းမပေါ်ရှိ တစ်စိမ်းတစ်ရံကို ရိုက်ရသည်မှာ အနည်းငယ်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ရှိနိုင်ပါ လိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့် အများစုမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်သည်ကို ၈ရု မစိုက်ကြပါ။ သဘောကျ သူ များကြပါသည်။ ပုံများကို ပြန် ကြည့်ပါက ပုံများထဲ တွင် ပြုံးရွှင် သည့် မျက်နှာ များစွာ ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ စိုးရိမ် စိတ်ကို ဖယ် ကာ ရိုက်သာ ရိုက်ပါ။ သို့သော် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် မရိုက်ပါ နှင့်၊ သူတပါးအား အနှောက် အယှက် မရှိ ဟု ထင်ပါက ရိုက်သာရိုက်ပါ။ အမြန် ရိုက်ပါ။ အချိန်မဆွဲပါနှင့်။
ပြုံးရွှင်သော Street Photography များ
၂။ ထိတွေ့ ပြောဆိုပါ ၊ ထိုအမူအယာကို အမိဖမ်းပါ။
Street Photography သည် ဒေသခံ လူထုနှင့် လျှင်မြန်စွာ ထိတွေ့မှု တစ်ခု လည်း ဖြစ်သည်။ ဒေသခံ လူထုနှင့် စကားစမြည် ပြောပါ။ တစ်ကြိမ်မက ပြောဆို ဆက်ဆံမှု ပြုပါ။ ရင်းနှီး လာစဉ် ၄င်းတို့ ထံမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမူအယာလေးများ ထွက်ပေါ် လာပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့ သို့ Moment များကို ဖမ်း ယူ ထားလိုက်ပါ။
၃။ နေ့ခင်းဘက်တွင်ရိုက်ခြင်းသည် ည ဘက်ရိုက်ခြင်းထက် ပိုလွယ်သည်။
ညပိုင်းတွင် ရိုက် သည့် များစွာ Dramatic ဆန် သော ထိပ်တန်း Street Photography များ ရှိပါသည်။ Street Photography သည် အချိန် လု ရိုက်ရသည့် ရိုက် နည်း ဖြစ်သော ကြောင့် အလင်းရောင် နည်းသည့် ည ပိုင်းရက်ရာတွင် နေ့ခင်းထက် အခက်အခဲ ပို၍ ရှိသည်။ ည ပိုင်း မရိုက်ရန် ဆိုလိုသည် မဟုတ်။ Street Photography ရိုက်ခြင်းလက် သားကျ လာသည့် အချိန်တွင် ညပိုင်း ထွက် ရိုက်ပါ။
ဓါတ်ပုံ သမား များ အားလုံးသိပြီး ဖြစ် သည့် အတိုင်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် Light သည် အဓိက ဖြစ်သည်။ နေ့ ခင်းတွင် အလင်းရောင် လုံလောက်စွာ ရသည်။ ညပိုင်း ၏ Low Light situation တွင် အလျှင်အမြန် ရိုက်ရမည်မှာ လွယ်သည့် ကိစ္စမဟုတ်။ မတတ် သာလျှင် Flash သုံးရ တော့မည်။ တစိမ်း တစ်ရံ စာ ကို ရိုက်ရာတွင် Flash ဖွင့်ရိုက် ရန် မှာ လွယ် တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ် ဆိုသည် ကို အထူးပြော ရန်မလိုပါ။
၄။ ရိုက်မည် နေရာ ကို စဉ် ရွေးချယ်ပါ။
Street Photography ရိုက် တော့ မည် ဆိုလျှင် မည်သည့် နေရာ ၊ မည်သည့် Theme အား ရိုက်မည် ကို သတ်မှတ်ကာ နေရာရွေးချယ်ပါ။ မြို့ထဲ လယ်ပတ်နေသည့် လူတွေကို ရိုက်မည် လား။ ပျံကျ ဈေးကို ရိုက်မည်လား သို့ မဟုတ် ငါးဖမ်း လုပ်သားတွေ ရဲ့ ဘ၀ ကိုဘဲ ရိုက်မည်လား စသည်ဖြင့် နေရာ ရွေးချယ်ပါ။ ပုံ တစ်ပုံ ၏ Impact ကောင်းနိုင်သမျှ ကောင်း အောက် ကြိုးစားပါ။
၅။ Street Photography တွင် မည်သည့် ဥပဒေသ ( Rules ) မျှ မရှိ။
Street Photography တွင် မည်သည့် ဥပဒေသ ( Rules ) မျှ အတိအကျ မရှိ ပေ။ လမ်းညွှန်ချက် (Guidelines)လောက်မျှသာ ရှိသည်။ သို့ ရာတွင် အများစုမှာ မည်သည့် အကန့်အသတ်မျှ မထားဘဲ ရိုက်သည်က များသည်။ Street Photography တွင် ဓါတ်ပုံ ကို မည်သို့ မည်ပုံ ရိုက်သည် ထက် ပုံ ၏ ရလဒ် ( End Results ) က သာ အရေး ကြီးသည်။ မည်သည့် ကင်မရာ မည်သည့် Lens ဘာမျှ အရေး မကြီး ၊ ရိုက်ချင်တာ နဲ့ သာ ရိုက်၊ ပုံ၏ Result သည်သာ အဓိက ကျသည်။ အချို့ Street Photography များသည် ဓါတ်ပုံ ရည်အသွေးတို့ Composition တို့ ဘာကိုမှ ထည့်မတွက်ဘဲ ကမ္ဘာကျော် သွားသည့် ပုံတွေ များစွာ ရှိသည်။
၆။ Street Photography သည် ပျော်ရွှင် ဘွယ် ရာ ဖြစ်သည်။
Street Photography ရိုက်ခြင်းသည် ပျော်ရွှင် ဘွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့် လယ် ကြည့် ရှုပါ။ ဒေသခံ လူထု နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။ လမ်း တလျှောက် သွားရာ လာရာ ရိုက်သင့်တာ တွေလေးမျာကို ရိုက်ပါ။ သိတ်ကြီးလည်း အလေး အနက်လည်း မထားပါနှင့်။ ပေါ့ပေ့ါ ပါးပါး သာ ရိုက်ပါ။
Street photography ရိုက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုချက်များ။
၁။ ရိုက်ကွင်းထဲ ရှိလူများနှင့် တစ်သား ထည်း ၀တ်စား ပါ။
Street Photography ရိုက်ရန် ထွက်သည့် အချိန်တွင် ရိုက်မည့်နေရာရှိ လူများ ၀တ်စားထားသကဲ့ သို့ ၀တ်စားပါ။ အထူးသဖြင့် Tourist များ သွားလာ လေ့ ရှိသည့် နေရာ များ တွင် Tourist များ ကဲ့သို့ ပင်ဝတ်စား ထားပါ။ ရိုက်ကွင်းထဲရှိ လူအားလုံး နှင့် တစ်သားထဲ ဖြစ်နေပါစေ။
၂။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြီးသော်လည်း ကင်မရာမှ မျက်လုံးကို မခွာ ပါနှင့် ။
မိမိ ရိုက်ထားသည့် ရိုက်ကွင်းထဲရှိ Subject က သူ့ကို သာ ကွက်၍ ရိုက်နေသည်ဟု မထင်စေ ရန်အတွက် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြီး စေကာမူ မျက်နှာ ကို ချက်ခြင်း ကင်မရာမှ မခွာ ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင် ကို View Finder ထဲက ကြည့်ကာ ဟိုချိန် သည်ချိန် လိုက် ချိန်နေပါ။ မျက်နှာ ကို ကင်မရာမှ ချက်ခြင်း မခွာ လိုက် ပါ နှင့်။
၃။ မျက်လုံး နှစ်လုံးစလုံး ဖွင့် ထားပါ။ LCD ကိုပိတ်ထားပါ။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် မျက်လုံး နှစ်လုံးစလုံးဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် ရိုက်ကွက်များကို ပို၍ မြင်ရသည်။ တစ်ခုကို ကြည့်နေစဉ် အခြားတစ်ခုကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်နိုင်သည်။ လူသွားလူလာ များသည့် လမ်းပေါ်တွင် ရိုက်ကွက် များလှသည်။ ကင်မရာ အပြင်ဘက်ရှိ မျက်လုံး က ပို၍ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရိုက်ကွက် အသစ်ကို မြင်နိုင်သည်။ ကင်မရာ LCD ကိုပိတ် ထား ခြင်းဖြင့် မိမိ နောက်ရှိ လှုပ်ရျားမှု ကို LCD ၏ ဖန်သားပြင်၏ Reflection မှတစ်ဆင့် မြင်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ည ပိုင်းတွင် ပို၍ မြင်နိုင်သည်။ သင့်တော်သည့် နေရာ တစ်နေရာကို ကြို၍ Pre-Focus လုပ်ထားပါ။ လူများ ၏ လှုပ်ရှားမှု သည် အလွန်မြန်သည့် အတွက် ကြိုချိန်ထားခြင်းက ပို၍ သေခြာသည်။ ချိန်သားထဲ ရောက်လာလျှင် ရိုက်ပါ။ သေခြာသည့် နည်း ဖြစ်သည်။
၄။ ကင်မရာကို မျက်လုံး နေရာမှ ရိုက်မည့် အစား တင်ပဆုံ ( Hip) နေရာမှ ရိုက်ပါ။
မျက်လုံးနေရာမှ ရိုက်သည့် မြင်ကွင်းသည် နေ့စဉ် တွေ့နေကြ ၊ များစွာ ရိုးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ပို၍ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ကောင်းစေရန် ကင်မရာကို မိမိ၏ တင်ပဆုံ (Hip)အမြင့် နေရာ လောက်မှ ရိုက်ကြည့်ပါ။ မျက်စေ့ နှင့် ကြည့်၍ မရသောကြာင့် Frame လုပ်ရန် တော့ ခက်သည်။ လေ့ကျင့်ကြည့် ပါ။ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာပုံ များရ နိုင်ပါသည်။
Hip Shot နမူနာ ပုံများ
၅။ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေ၊ တစ်ဦးခေါ် သွားပါ။
ဤ နည်းကို ရှေး ထည်းကပင် သုံးခဲ့ ကြသည်။ လူအုပ် ထဲတွင် မိမိ၏ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေ ကို ရောကာ ရပ်ခိုင်းထားပါ။ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေကို တယ်ကြက် ( Decoy ) အဖြစ် ထားကာ အခြားသူများကို ရိုက်ပါ။
၆။ လမ်းလျှောက် လျင် နှေးနှေး လျှောက်ပါ။ ရိုက် ရာတွင် မြန်မြန် ရိုက်ပါ။
အထူးရှင်း ရန် မလို တော့ ဟု ထင်ပါသည်။
၇။ Shutter Speed
Street Photography သည် လက်နှင့်ကိုင်ကာ အမြန် ရိုက်ရသည့် Hand Held ရိုက်နည်း ဖြစ်ရာ Hand Held Rule ဖြစ်သည့် Shutter Speed နှင့် Focal Length တို့ တူညီနေစေရန် Set လုပ်ထားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ 30mm Lens ဖြင့် ရိုက်လျှင် Shutter speed သည်လည်း 1/30 Sec. ထားရန် ဆိုလိုသည်။ အချို့ ပုဂ္ဂိုလ် များအနေနှင့်မူ 1/15 Sec. လောက်ကို ငြိမ် အောင် ကိုင်၍ရိုက်နိုင်သည်။ ခေတ် မှီ Lens မျာတွင် ကင်မရာ တုန် လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းပေးသည့် ကိရိယာ များရှိနေပြီ ဖြစ်၍ စိုးရိမ်ဘွယ်ရာ နည်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
သတိပြုရန်မှာ ကင်မရာမည်မျှ ငြိမ်ပါစေ Subject က မြန်နေပါကလည်း ပုံ ၀ါး သွားနိုင် သည်။ လှုပ်ရှားနေသည့် Subject’s Average Speed ကို Freeze လုပ် နိုင်မည့် Shutter Speed ကို Set လုပ်ထားသင့်သည်။
၈။ High ISO
High Shutter Speed တင်ရိုက်နိုင်ရန် ISO တင်ထားပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ခေတ်မှီ ကင်မရာများအနေနှင့်် ISO 1600 အထိ တင်ထားစေကာမူ သိသာသော Noise ထမှု မရှိ ။ နေ့ ခင်းတွင် ထို ISO နှင့်ဆိုပါက Shuitter Speed 1/4000 လောက်အထိ အသာလေး ရိုက်နိုင်သည်။ အတော်မြန်သည့်ှလှုပ်ရှားမှု ကို Freeze လုပ်နိုင်သည်။
၉။ အရေးကြီးသည့်ပုံ ကို အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ပါ။
အရေးကြီးသည့် ပုံများကို တစ်ပုံထည်းရိုက်ပြီး ရပ်မထားပါ နှင့် ကြိမ်းသေ စေရန် အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ပါ။ Continuous Speed ဖြင့် တစ်စက္ကန့် ကို လေးပုံငါးပုံ လောက် ရိုက်ထားပါ။
၁၀။ ကင်မရာ တစ်လုံးတွင် Lens တစ်လုံးသာ သုံးပါ။
အရေးအကြောင်း တွင် Lens လဲ နေရန် အချိန်မရှိ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သီးခြား Lens တစ်လုံးစီ နှင့် ကင်မရာ နှစ်လုံး ယူသွား ပါ။
၁၁။ ခက်ခဲသော အခြေအနေများ တွေ့ ပါလျှင်။
အမေရိကား Sub Way, စင်ကာပူ MRT နှင့် ဥရောပ Metro ကဲ့ သို့ မြေအောက် မီးရထား များတွင် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာ၌ အကြမ်းဖက် သမား ဟုထင်ကာ မကြာခန ရဲများ စစ်ဆေးခြင်း ခံ ရနိုင်သည်။ အဆိုပါ နေရာ များကို သွားရိုက်ပါက ID မှတ်ပုံတင် ယူသွားပါ။ အစစ်ဆေး ခံ ရပါက မိမိ သည် Fine Art ဓါတ်ပုံ သမားဖြစ်ကြောင်း ၊ မည်သည့် ကိစ္စကြောင့် ရိုက်ရ ကြောင်း ရှင်းပြပါ။
လူပုဂ္ဂိုလ် ကို ရိုက်လျှင် ခွင့်တောင်းပြီး မှ ရိုက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ မိမိ ရိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက သူ့ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက် ပါသလားဟု လာမေး ပါက မလိမ် ပါနှင့်။ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြော ပါ။ မည်သို့ မည် ပုံ စိတ်ဝင်စား သည့် အတွက် ရိုက်မိကြောင်း ပြောကာ ရိုက်ထားသည့် ပုံ ကို ပြလိုက်ပါ။ ကာယကံ ရှင် အနေနှင့် ကြေ နပ်သွားကောင်း ကြေ နပ် သွားနိုင်သည်။ မကြေနပ်ပါက ပုံ ကို သူ့ရှေ့ တွင် ပင် ဖျက်ပေး လိုက်ပါ။
၁၂။ ပုံများကို မဖျက်ဆီး ပစ်ပါ နှင့်
မည်သို့သော အခြေ အနေ ဖြစ်ပါစေ မည်သည့် ပုံကိုမျှ မဖျက်ဆီး ပစ်ပါနှင့်။ Street Photography အားလုံးသည် End product- Finished Work များသာ ဖြစ်သည်။
နည်းနည်း ပြဿနာ ရှိနိုင် သောရိုက်ချက်များ။
Street Photography သည် ငါးမျှားသကဲ့ သို့ ဖြစ်သည်။ ငါးမျှားထွက် တိုင်း ငါး ကြီးကြီး အမြဲ ရမည် ဟု တွက်၍မရ။ ကံ ကောင်း အကြောင်း တိုက်ဆိုက်ပါလျှင် ငါးကြီးကြီး ရ နိုင်ပါမည်။ ငါးသေး တွေနဲ့ ပင် ပြန်လာရသည့် အကြိမ်တွေလည်း ရှိပါမည်။ စိတ်ဓါတ်ကျ ရန် မလိုပါ။ သည် တစ်ကြိမ် မရ နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ့။
ကိုယ် တွေ့ Street Photography.
ကျွန်တော် သည် Pasir Ris သို့ အပတ်စဉ် ငှက် - အထူးသဖြင့် King Fisher ရေ ထဲ ဒိုင်ဗင် ထိုးကာ ငါးဖမ်းသည်ကို သွား ရိုက် လေ့ ရှိပါသည်။
King Fisher ရေ ထဲ ဒိုင်ဗင် ထိုးကာ ငါးဖမ်းသည်ကို ရိုက်ရသည်မှာ ငှက် နဲ့ လူ တို့ ကစားသည့် Game တစ်ခု လို Challenging ဖြစ် သဖြင့် Game သွားကစားသည် ဟု ဆိုရပါမည်။
ကျွန်တော်နေသည့် နေရာ မှ Pasir Ris သို့ ရထား တစ်နာရီ ခွဲ ခန့် စီးရပါသည်။ ရထားစီးနေစဉ် ယခင် အပတ်က Facd Book ပေါ် တင် ခဲ့ သော “ ပုခုံး ကို မှီ ၊ အပြုံး ချီကာ ၊ စကားသီမယ် “ ဆိုသည့် ပုံ လေးကဲ့ သို့ ၀င်စားဘွယ်ရာ ပုံ များ ကို Street Photography အဖြစ် ရိုက် လေ့ရှိပါသည်။
Street Photography ရိုက်ရသည်မှာ Challenging ဖြစ်၍ စိတ်ဝင်စား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ ပုခုံး ကို မှီ ၊ အပြုံး ချီကာ ၊ စကားသီမယ် “
ရိုက် သည့် ပုံ များစွာ ရှိပါသည်။ စိတ် တိုင်း မကျ တာ ကြောင့် မြောက် များစွာ သော ပုံ များ အနက် သည်တစ် ပုံသာ တင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ မှတ်စု ဖြစ်သည့် Street Photography ရေးစဉ်က နိုင်ငံတကာ ဆောင်းပါးများကို ဘာသာပြန်ကာရေး ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တွေ့ ဆို၍ မရှိသလောက်ပါ။
တကယ် ရိုက်သည့်အချိန် တွင် မူ အတော့် ကို ရိုက်ရ ခက်ပါသည်။ လမ်း ပေါ်မှာ ရိုက် တာ ဘာဥပဒေ နဲ့ မှ အညိစွန်းဘူး ဆိုစေကာမူ အတော် မျက်နှာ ပူ ရသော အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ရဲရဲ သာ ရိုက် လို့ အထက် က မှတ်စုထဲ မှာ ဆိုခဲ့စေကာမူ တကယ် ရိုက်တော့ မရဲ လှပါ။
Street Photography ရိုက်ရာ တွင် ဘာဥပဒေ နဲ့ မှ အညိစွန်းဘူး ဆိုစေကာမူ ပြသနာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်လာခဲ့ သည်ရှိသသော် အထက်ပါ မှတ်စု ပါ ဖြေရှင်းသည့် နည်း အတိုင်း ဖြေရှင်းပါက ပြသနာ မကြီးလာဘဲ ပြေလည်သွားပါလိမ့် မည်။
ကိုယ်တွေ့ လေး ပြော ပြ ပါရစေ……………..။
ကျွန်တော် တစ်နေ့ Pasir Ris အသွား ရထားရှေ့ ထိုင်ခုံ ပေါ်တွင် သက် ၂၀ ၀န်းကျင် ကလေး မလေး နှစ်ယောက် ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ငြိမ်ငြိမ် သက်သက် လေးတွေ မို့ ဘာမှ မထူး ခြားလှပါ။
တစ်နေရာသော ဘူတာ တွင် အဆိုပါ မိန်းကလေး များ ရဲ့ သူငယ် ခြင်း မလေး တက်လာပါ သည်။ အသား ညို စိမ့် စိမ့် အရပ် ရှည်ရှည် ၊ ရုပ်ရည် မှာ အလွန် ချော လှ သည် ဟု မဆိုနိုင်စေကာ မူ ရွက်ကြမ်း ရေချို ဖြစ်ပါသည်။
ထူးခြားမှု မှုာ သူ၏ အမူ အယာ ဖြစ်ပါသည်။အလွန် သွက်လက်ကာ Facial Expression မှာ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ နှင့် ကျွန်တော် လည်း သူ ရဲ့ Expression များကို အကောင်းဆုံး တစ်ပုံ လောက် ရနိုင် စေရန် ဖုံး ကင်မရာ ဖြင့် ရိုက်ပါသည်။ ပုံပေါင်း အတော် များများတွင် အဆင်ပြေ မည့် ဟု ယူ ဆရ သည့် ပုံ တစ်ပုံ မျှသာ ရ ပါသည်။
သူ ကလည်း စတူဒီယို ထဲ မှာ ရိုက် ရသည့် မော်ဒယ် မဟုတ်။ ရထားပြူ တင်းပေါက် က Strong against the Light ကလည်း ပြင်း ၊ မျက် နှာ ပေါ် ကြသည့် အလင်း ရေငြ် ကလည်း နည်း တော့ စဉ်းစား ၍ သာ ကြည့်ပါတော့ မည်မျှ ရိုက်ရ ခက်မည် ဆိုသည်ကို။
သည်လိုနဲ့ ရထားသည် ခရီး အတော် ပေါက် လာသည်တွင် လူတွေ လည်း အတော် ရှင်းသွားပါသည်။
ကျွန်တော် ထိုင်သည့် ခုံတတန်း တွင် လည်း ကျွန်တော် တစ်ဦး ထည်းသာ ရှိပါသည်။ ထိုစဉ် အဆိုပါ ကလေးမ သုံးယောက် အနက် မျက် မှန် လေး နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက် သည့် ကလေးမလေး ရဲ့ သူငယ်ခြင်း တစ်ဦးက ကျွန်တော့် ဘေး နား ကို လာ ကပ်ထိုင် လာပါသည်။ နောက် တော့ သူက -
“ စကားနည်းနည်း လောက်ပြော ပါရစေရှင် “ သူ ပြော တော့ ကျွန်တော် ကလည်း ၊
“ ပြောပါ “
“ စောစော က ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ် ခြင်း ကို ဓါတ်ပုံ ရိုက် လိုက် ပါသလား လို့ “
ဒီအချိန် တွင် ကျွန်တော် က Street Photography ရဲ့ တုန့် ပြန် မှု တစ် ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ ။ Street Photography ရဲ့ ဥပဒေ သ အတိုင်း အမှန်ကိုပြော ရပါမည်။
“ ဟုတ်ပါတယ်။ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ မင်းတို့ သုံးယောက် အနက် သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေး တွေ နဲ့ မျက်နှာပေး ( Facial Expression ) လေးတွေ ကြည့် လို့ ကောင်းတာနဲ့ Street Photography ရိုက်တာပါ ။ အခု လို ရိုက်ရာ မှာ လည်း စိတ်ကြိုက် ပုံ ရ ခြင်မှ ရတာပါ ။ ကိုယ် က အမှန်တော့ ငှက် ရိုက် တဲ့ သူပါ။ Bird Photography လိုဘဲ Challenging ဖြစ်တဲ့ Street Photography ကိုလည်း စိတ်ဝင် စားဘွယ်ရာ တွေ့ ရင် ရိုက်ပါတယ်။”
ဆိုကာ ဖုံးထဲ တွင် စု စည်း ထာသည့် ပုံ များစွာ အနက် Street Photography ပုံ များကို ပြကာ -
Street Photography ဆိုသည်မှာ အရိုက် ခံ သူ မသိဘဲ ရိုက် ပါက အဆိုပါ Subject ရဲ့ ပကတိ သဘာဝ အသွင်အပြင်ကို ရ နိုင်သဖြင့် အရိုက် ခံ နေရ သူမသိ ဘဲ ရိုက် လေ့ရှိကြောင်း ၊ ယခုပြ သည့် ပုံ များတွင်ပါသည် သူများသည် သူတို့ ကို ရိုက်မှန်း မသိကြကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။
သူ က ရှေ့ တွင် ထောင် ထားသည် ကင်မရာ အိပ်ကြီးကို ကြည့် ကာ -
“ Professional အဖြစ် ရိုက်တာပါလား “ လို့ မေးပါသည်။
“ မဟုတ်ဘူး။ ၀ါသနာ အရပါ “
ပုံ များကို ပြရာ တွင် အချိုးသော ရှုခင်း ပုံများကို သူ က ဘယ်မှာ ရိုက်ပါသလဲ ဟုမေးရာ ကျွန်တော် က သြစတြေလျှ ၊ Victoria Lake မှာ ရိုက်ခဲ့ ကြောင်းပြော ရာ သူက သူလည်း Melbourne မှာ တက္ကသိုလ် တင်ခဲ့ကြောင်းပြော ပါသည်။
သူ စိတ်ဝင်စားသည့် အချိ့သောငှက်ပုံ များကိုလည်း အသေးစိတ် တောင်းကြည့် ပါသည်။
နောက်တော့ ကျွန်တော် ရိုက်ထားသည့် သူ့ သူငယ်ခြင်း ပုံ များကို တစ်ပုံ ခြင်း ပြန်ပြ ကာ စိတ်ကြိုက် မဟုတ်သည့် ပုံ များကို သူ့ရှေ့တွင် တစ်ပုံ ခြင်း ပြန် ဖျက် ပါသည်။ စိတ်ကြိုက် တစ်ပုံ မှ မရ သည့် အတွက် ဖျက် ပစ်ရကြောင်း သိ့ မဟုတ်ပါက Waste of Space ဖြစ်ကြောင်းပြောရာ သူ က ရယ်ပါသည်။
“ နောက် တစ်ချက် က Street Photography ရဲ့ စည်းကမ်း အရ အရိုက်ခံ ရသူ မကြေ နပ် ပါက ကာယကံ ရျင် ရှေ့ တွင် ပင် ဖျက် ပစ် ရပါတယ် “ လို့ ရှင်းပြ လိုက်ပါတယ်။
ပညာ တတ် ယဉ်ကျေးသည့် မိန်းကေ လးများဖြစ်၍ ဖျက်ပေးပါ ဟု မဆိုစေကာမူ ကိုယ်က အလိုက်တသိ နဲ့ ဖျက်ပေးလိုက်ပါသည်။
“ မင်း တို့ ဘယ် သွားကြ မှာလည်း “
“ ကျွန်မတို့ Pulau Ubin ကျွန်းကို သွားကြမှာပါ။ အန်ကယ် လည်း အဲဒီကိုဘဲ သွားမယ် လို့ ထင်ပါတယ် “
“ မဟုတ်ပါဘူး..အန်ကယ်က Pasir Ris ကို ငှက် သွားရိုက်မှာပါ “
သို့ နှင့် ရထားသည် Pulau Ubin ကို သွား ရန် ဘတ်စ်ကားပြောင်းစီးရမည့် Tanah Merah ဘူတာရောက် လာသည့် နှင့် ခလေးမလေး သုံးဦးစလုံးက နှုတ် ဆက်ကာ ရထားပေါ်မှ ဆင်းသွားကြပါသည်။
အချူပ် အားဖြင့် သုံးသပ် ရပါလျှင် မိမိ ရိုက်ထားသည့် ပုံသည် အရိုက်ခံ ရသူ ၏ တစ်ခုသော အလှကို ဖေါ်ဆောင် ရန် စိတ်ကူးဖြင့် ရိုက် ပါက ကာယကံ ရှင် က သိ သဖြင့် ပြော ဆိုလာသည့်တိုင် ပုံ ကို ပြ ကာ သူ ၏ရှေ့ တွင် ဖျက် ပေးလိုက်ပါက ပြသနာ ရှိ မလာ နိုင်ဟု ဆိုရပါမည်။
ဤကိစ္စ က ဘာမျှ မဟုတ် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ နေရာ များကို ရိုက် မိပါက မည်ကဲ့ သို့ ဖြေရှင်း ရမည်ကို အထက် ပါမှတ်စု တွင် ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
Posted by Soe Hlaing at 07:52
Ko Kyawlinnhtike 23 July 2013 at 02:43
Thankalost for your shearing bro!
Phyo Zaw thein7August 2014 at 09:37
lwin koko 25 May 2017 at 08:01
Thank you so much Saya U Soe Haling, I got many information about street photography from this article.